Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Ndị ọbịa Hawaii na-abata na nke mbụ n'ime otu afọ
Ndị ọbịa Hawaii na-abata na nke mbụ n'ime otu afọ
Ndị ọbịa bịara Hawaii na Machị 2021 bilitere 1.1 pasent ma e jiri ya tụnyere otu afọ gara aga, dịka ọnụọgụ mbido nke Hawaii Tourism Authority (HTA) wepụtara. Nke a bụ oge izizi n'ime otu afọ ebe ndị ọbịa bịara, mana ndị mbata nke ụbọchị ka nọ na-agbada (-60.1%).
Ná nkezi, ndị ọbịa dị 137,440 nọ na Hawaii ugbu a kwa ụbọchị ọ bụla n'ọnwa gara aga na Machị.
Imirikiti ndị ọbịa enweela ike ịgafe mkpokọta onwe onye nke ụbọchị 10 site na ịnye ezigbo nyocha COVID-19 nke sitere na Onye Mmekọ Nyocha Tụkwasịrị Obi.
Imirikiti ndị ọbịa ahụ sitere na US ebe enwekwara ụfọdụ ndị ọbịa si Japan, Canada, na ahịa mba ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa 439,785 gara njem ụgbọ elu na Hawaii n'ọnwa gara aga, ma e jiri ya tụnyere ndị ọbịa 434,856 ndị bịara site na ikuku (430,691, + 2.1%) na ụgbọ mmiri (4,165 ọbịa) na Machị 2020. Nchịkọta ọnụ ọgụgụ kwa ụbọchị gosipụtara na e nwere 137,440 ndị ọbịa na Hawaii na ụbọchị ọ bụla na Machị 2021, ma e jiri ya tụnyere ndị ọbịa 127,760 kwa ụbọchị na Machị 2020.
The Oria ojoo COVID-19 malitere iwere nnukwu nsogbu na ụlọ ọrụ ndị ọbịa na Hawaii otu afọ gara aga. Na Machị 26, 2020, steeti ahụ wepụtara ụbọchị iri anọ iji kwado ndị njem. N'ikpeazụ, a kagburu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọelu trans-Pacific na interisland niile, a kwụsịtụrụ ọrụ ụgbọ mmiri na njem niile akwụsị. Nke a gara n'ihu rue etiti ọnwa Ọktoba mgbe steeti bidoro mmemme Travel Travel, nke mere ka ndị njem trans-Pacific gabiga mkpuchi iche ma ọ bụrụ na ha nwere ule na-adịghị mma maka COVID-14.
Na Machị 2021, ọtụtụ ndị njem si na steeti na-ejegharị ma na-agagharị na mpaghara ga-agabiga iwu onwe onye nke ụbọchị 10 iji wepụta onwe gị iche na nyocha COVID-19 NAAT na-esite n'aka Onye Mmekọ Ule Tụkwasịrị Obi site na mmemme nchekwa njem nke steeti. . Ndị njem trans-Pacific niile na-esonye na mmemme nnwale tupu njem a chọrọ ka ha nwee nsonaazụ nnwale na-adịghị mma tupu ha apụ na Hawaii. Kauai County nọgidere na-akwụsịtụ nwa oge na nsonye ya na mmemme njem nchekwa nke steeti, na-eme ka ọ dị mkpa maka ndị njem trans-Pacific niile na Kauai ka ha kpọpụ iche mgbe ha rutere ma e wezụga ndị na-esonye na mmemme nnwale tupu na njem na "ebe a na-eme njem" ihe onwunwe dị ka ụzọ isi belata oge ha. Obodo nke Hawaii, Maui na Kalawao (Molokai) nwekwara ndi iche iche iche na ebe onwa March. Ọzọkwa, USlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa nke United States (CDC) gara n'ihu na-akwado “Iwu Sagbọ njem Ọsọ” na ụgbọ mmiri niile.